« Star Tour » Mahajanga: hohafanain-dry Basta Lion, Elidiot, Jazz MMC… | NewsMada
« Star Tour » Mahajanga: hohafanain-dry Basta Lion, Elidiot, Jazz MMC…
Tonga ny andiany faharoa. Efa fotoana ifanomezana isaky ny fialan-tsasatra ao Mahajanga ny « Star Tour ». Feno ny fandaharam-potoana fialambony mandritra ny telo andro.
Fialamboly isan-karazany sy ho an’ny olon-drehetra. Azo fehezina anatin’izay ny tanjona amin’ny « Star Tour ». Na izany aza, mibahana hatrany ny lafiny mozika ao anatin’izay, nandritra ny taona maro. Raha tarafina amin’ny andiam-pampisehoana fotsiny, mitodika bebe kokoa amin’ny tanora ny « Star Tour » any Mahajanga amin’ity, hotontosaina ny 24, 25 ary ny 26 aogositra ho avy izao.
Notsongaina manokana ireo mpanakanto vao misondrotra kanefa efa kalaza amin’izao fotoana izao. Anisan’ireny ry Basta Lion, Elidiot ary Jazz MMC. Hanampy azy ireo ry Stéphanie sy Tence Mena, izay efa fanta-daza nandritra ny taona maro.
Vao tolaka ny andro dia hanomboka ny fanentanana isan-karazany, ho fampidirana ny tena fety, ny zoma 24 aogositra. Hiakatra eo amin’ny sehatra lehibe, eny amin’ny Bord Mahajanga, kosa I Jazz MMC, manomboka amin’ny 6 ora hariva. Handimby azy amin’ny 7 ora sy sasany hariva i Stéphanie.
Hosokafan’ny “carnaval” manerana ny tanàna kosa ny tolakandron’ny asabotsy. Hifarana eo anoloan’ny sehatra lehibe izany, izay hitohy amin’ny “mega zumba”. Hampiditra ny hafanana kosa ireo mpikosoka kapila aorian’izay, mandra-piakatr’i Elidiot an-tsehatra.
Ny alahady kosa, hanomboka ny fampisehoana i Basta Lion, amin’ny 6 ora hariva. Handimby azy an-tsehatra kosa i Tence Mena sy ny mozikany izay nampisongadina azy hatramin’izay. Hofaranana amin’ny afomanga ny fety, amin’io alahady io.
Ankoatra ny eo amin’ny sehatra lehibe, hisy koa ny sehatra iray natokana ho an’ny mpianakavy ao amin’ny “espace terrasse”. Kilalao sy fialamboly maro ny ao, toy ny fanentanana “Mme Queen’s” sy “Mlle XXL” ary “Mr Amigo”.
Toa ny efa mahazatra, hiantoka ny fanentanana i Honorat Fou Hehy sy i Andry Barhone. Eo koa ry DJ Cyemci, Teejay Jerry, Nicki Di Manu, eo amin’ny fampiakarana ny hafanana.